A nnọọ mfe, ma nnọọ irè, mmetụta na-agbanwe agbanwe na-agba nke a video clip. Nke a pụrụ ịbụ a dị mfe ka-eku (na-akpọ "Ifriizi ụba") ma ọ bụ na-akpọ a clip na ngwa ngwa ma ọ bụ ngwa ngwa ngagharị.
Isiokwu a gosiri na ị otú ime nke a na-eji Final Cut Pro X.
Ka okpokolo agba
A ka na--eku freezes edinam. Ka ihe atụ, ebe a bụ clip nke a Hummingbird-njikere adaa na a nnụnụ feeder. M chọrọ ike a ifriizi-etiti nke nnụnụ na ụgbọ elu. (Um, yeah, m na-eji "ifriizi-eku" na "ka-eku" notu.)
Na Final Cut Pro X, na-etinye playhead (ma ọ bụ skimmer) na etiti na ị chọrọ ifriizi na ụdị Option + F.
A na-emepụta abụọ na abụọ ifriizi-etiti na ọnọdụ nke playhead.
Gbanwee oge nke etiti site trimming ọnu; dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ clip. Ebe a, ka ihe atụ, m na-eme ka oge nke ifriizi-eku 11 okpokolo agba mkpumkpu.
Ọ bụrụ na ị nọ na-eche, nke a bụ ihe ifriizi anya dị ka. Ọ freezes elu nke Hummingbird n'etiti playback, ikwe anyị ịgbakwunye ndịna-emeputa ma ọ bụ ndị ọzọ ederede mgbe ahụ ịmalitegharịa edinam ka o nweghị ihe merenụ.
Nnọọ jụụ, ma e wezụga ....
Ọfọn, ozi ọma ahụ bụ na nke a bụ ngwa ngwa na mfe. The ọjọọ ozi ọma bụ na anyị na-enweghị ike ịgbanwe ọnọdụ nke ka eku.
Ya mere, ebe a bụ ụzọ ọzọ na-eme nke a.
Na-etinye playhead (ma ọ bụ skimmer, ma m na-ahọrọ playhead) na etiti na ị chọrọ ifriizi, họrọ clip, mgbe ahụ pịnye Mgbanwe + F.
Nke a locates isi iyi clip dị na nchọgharị, ahọrọ ma ndị Nchọgharị na clip, na ọkụ ọnọdụ nke Na, si, na playhead.
Ugbu a, na ihe nchọgharị họrọ, ụdị Option + F. A na-emepụta ifriizi-etiti nke Nchọgharị clip na ebe ya na ọnọdụ nke playhead dị ka a ejikọrọ clip na usoro iheomume.
Dị ka a ejikọrọ clip, anyị nwere ike ịkpali ọhụrụ a ifriizi-eku n'ebe ọ bụla anyị chọrọ. Otú ọ dị, ịkpachara anya na-akpụ akpụ na clip, n'ihi na, ma ị na-akanye akara mbụ etiti na a welara (ụdị "M"), e nweghị ụzọ dị mfe iji dakọtara ka etiti na isi iyi etiti, ozugbo ka etiti na-akpali ebe ọzọ.
M na-eji ma ndị a usoro dị iche iche oru ngo.
A jide ụba yiri ihe na-akara ka etiti, ma na ihe mgbanwe.
Na-etinye playhead (ma ọ bụ skimmer) na etiti na ị chọrọ ka o jide. Mgbe ahụ, mgbe ahụ, iji ma gbanwee> Retime ma ọ bụ "Smurf-on-a-headset" Toolbar icon, họrọ Jide ụba (ma ọ bụ ụdị: Mgbanwe + H).
Nke a na-egosiputa oroma Retime nchịkọta akụkọ mmanya n'elu clip, na obere red òkè-egosi na Jide eku.
Ịgbanwe oge nke jide etiti site dọlite ​​obere isi mkpịsị aka nri njedebe nke red mmanya.
Tinye a ọsọ ramp mgbanwe na njedebe nke jide etiti site na ịpị ala-na-atụ akụ ọzọ na okwu "Jide" ke Retime Editor.
Ịgbanwe n'ezie etiti-e, abụọ-pịa mmanya akara ngosi na-ekpe nke red jide ngalaba na-ahọrọ Isi Iyi ụba (Edit). Nke a-enye gị ohere Mia jide etiti nhọrọ ekpe ma ọ bụ aka nri.
IHE: Agbanwe Agbanwe isi iyi etiti bụ a mma na-amasị m a Lọt!
Ngwa ngwa (ma ọ bụ Ọsọ) Motion
Anyị na-eji ngwa ngwa-ngagharị na-egosi ihe ndị a na kwa ngwa ngwa maka unaided anya ịhụ. Na ngwa ngwa ngagharị na adị nnọọ ngwa ngwa ihe. Ma ndị a na mmetụta na-eji ihe na-akpọ a "mgbe nile ọsọ mgbanwe," ebe dum clip mgbanwe site na otu ego - ma ngwa ngwa ma ọ bụ iji nwayọọ.
Anyị na ike ma mmetụta iji otu ngwaọrụ, dị nnọọ iche iche ụkpụrụ. A bụ otú.
Họrọ clip onye bụ onye ọsọ ị chọrọ ịgbanwe. Mgbe ahụ, iji ma gbanwee> Retime ma ọ bụ "Smurf" Toolbar icon, họrọ ngwa (ma ọ bụ Fast).
Họrọ otu nke dịnụ gbapụrụ ọsọ; na nke a, 50%. (Ee, ị pụrụ gbanwee nke a ka ọ bụla bara uru ị chọrọ, m ga-egosi gị otú ị na a nkeji.)
Ihe atọ eme ozugbo:
Oge nke clip mgbanwe
Oroma Retiming mmanya na-egosi n'elu nke clip
Ọsọ nke clip mgbanwe
Iji tọgharịa ọsọ azụ nkịtị (100%), pịa ala-na-atụ akụ na Retiming mmanya na-ahọrọ Nkịtị (100%).
E nwere ụzọ abụọ ịgbanwe ọsọ nke a clip.
The mfe ụzọ bụ jidere na obere ahụ na njedebe nke clip na ịdọrọ ekpe ma ọ bụ aka nri. Ọsọ ga-agbanwe ka ị na ịdọrọ ya.
Ma ọ bụ, n'ihi na ihe nkenke, pịa ala-na-atụ akụ na Retiming mmanya na-ahọrọ Custom.
Nke a ga-emepe a ọhụrụ dialog ikwe a ọtụtụ mgbanwe:
Laa azu. Na-arụ na clip na agbara.
Ọnụego. Họrọ a kpọmkwem ọsọ mgbanwe dị ka a pasent nke nkịtị ọsọ maka a clip. Erughị 100% bụ ngwa ngwa-ngagharị. Ihe karịrị 100% bụ ngwa-ngwa-ngagharị.
Duration. Họrọ a kpọmkwem oge maka a clip na FCP X ga gbakọọ otú ngwa ngwa ma ọ bụ jiri ya chọrọ ịga.
Ripple. Mgbe enyocha, adjusts oge nke a clip dabere n'elu ọsọ. Mgbe na-achịkwaghị achịkwa, na clip oge na-anọgide ofu ọbụna mgbe ọsọ mgbanwe.
Ị ga-enweta smoothest ọsọ mgbanwe mgbe pasent ị na-ahọrọ na-ekewa evenly n'ime 200. ka ihe atụ, 100, 66, 50, 40, 33, 25, 20, 10 na na.
Mmezi Ebe E Si Nweta
Nwere bụ onye ọzọ ọnọdụ tụlee mgbe slowing a clip. (Nke a na-adịghị emetụta mgbe na-eke ngwa ngwa ngagharị.)
Iji, ọzọ, ma gbanwee> Retime ma ọ bụ "Smurf" menu, họrọ Video Ogo.
Nkịtị. Nke a bụ nhọrọ kasị mma maka gbapụrụ ọsọ nke 50% ma ọ ngwa ngwa.
Etiti agakọ. Nke a bụ nhọrọ kasị mma maka gbapụrụ ọsọ nke banyere 20% na 50%.
Optical Flow. Nke a bụ nhọrọ kasị mma maka gbapụrụ ọsọ iji nwayọọ karịa banyere 20%.
Etiti agakọ ewepụta a obere igbari n'etiti okpokolo agba mgbe na-agba ọsọ ngwa ngwa ngagharị iji melite nro nke ngagharị. Optical Flow invents na-n'etiti okpokolo agba iwelata jerkiness nke nnọọ ngwa ngwa ngagharị.
Etiti agakọ dịtụ ngwa ngwa na mfe. Optical Flow ga-ele anya ka mma na ọtụtụ mgbe, ma na-ewe ogologo oge na-aza.
Ma ị chọrọ ka gị na Obere vidiyo na adị, jiri nwayọọ ma ọ bụ nanị larịị na-akwụsị, Final Cut Pro X-eme ka dum usoro mfe.
Na, ugbu a, ị maara otú.
> Resource> FCP> Final Cut Pro X: Ifriizi-Frames na ngwa ngwa Motion